Candy Crush ဆိုဒါ Saga - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / Candy Crush ဆိုဒါ Saga
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ ဇူလိုင်လ 20, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
သမိုင်းတစ်လျှောက်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အချိန်၏ အုံ့မှိုင်းခြင်းတွင် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။. သို့သျောလညျး, သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်ထက် ပိုကြာအောင် ဒီလိုအရည်အသွေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်။. ဒီလိုပါပဲ။, Candy Crush သည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ထွက်ခွာရန် မျှော်လင့်ထားသည့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Candy Crush သည် ၎င်းတို့၏ ဂိမ်းတွင် မတူညီသော အရာအချို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊. ထူးထူးခြားခြား, ၎င်းတို့သည် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များနှင့် ၎င်းတို့၏အဆင့်များကို သယ်ဆောင်လာရုံသာမက၊ ဂိမ်းကဲ့သို့သော ဗားရှင်းအသစ်ကိုပါ ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ Candy Crush ဆိုဒါ Saga.
Candy Crush ဆိုဒါ Saga လူကြိုက်အများဆုံးဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, အင်တာနက် စစ်တမ်းတွေအရ၊, Candy Crush ဇာတ်လမ်းစီးရီးထဲမှာ. ဂိမ်းသည် ၎င်း၏စီးရီး၏ လမ်းကြောင်းအတိုင်း တစ်ဖန်နောက်လိုက်နေပုံရသော်လည်း Sodas နှင့် သကြားလုံးများကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပိုမိုမြင့်မားစေသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော အပိုင်းများနှင့် ဂိမ်း၏အဆင့်များသို့ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်များသည် ပြောင်းလဲနေပါသည်။.
နှင်းခဲအဆင့်: သင်သည် ဤအဆင့်ကို အဆင့်တွင်သော့ဖွင့်ပါ။ 6. ဒီအဆင့်မှာ, သကြားလုံးတွေကို အတူတူပေါင်းရရုံသာမက Soda ကို အပေါ်ကနေ ယူလာဖို့အတွက် ရေခဲတုံးတွေကို ချိုးပေးရပါမယ်။.
ပူဖောင်းအဆင့်: ဤအဆင့်တွင် သင်သည် ဝံပုလွေများကို ကြိုးများဆီသို့ ယူဆောင်လာရုံသာမက, ထိပ်ဆုံးမှာ, ဒါပေမယ့် board ပေါ်က Soda အဆင့်ကိုလည်း တိုးပေးရပါမယ်။.
ချောကလက်အဆင့်: ချောကလက်အဆင့်သည် ၎င်း၏အမည်ဖြင့် ထင်ရှားသည့်အတိုင်း ချောကလက်တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။. လျင်မြန်စွာကြီးထွားနေသော ချောကလက်များ ပျံ့နှံ့မှုကို ရပ်တန့်ရန် လိုအပ်သည်။.
ပျားရည်အဆင့်: ဒီအဆင့်မှာ, you need to be persistent, while you take out the bears from underneath the honey blocks with this in mind that the layers of honey in blocks can need up to clearing of6layers.
Striped candy is the first one. Along with giving points it also helps you clear out an entire row. Secondly, there is wrapped candy. By matching this candy, you remove more candies; especially, 8 candies which are around wrapped candy. တတိယအချက်, လေးထောင့်နှစ်ခုနှင့် နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ငါးသကြားလုံးများ ရရှိနိုင်သည်။. ထို့ကြောင့် ဤငါးများသည် ပျဉ်ပြားတစ်ဝိုက်တွင် သကြားလုံးအမျိုးအစားတစ်ခုခုကို စားမိကြသည်။
ဒါတွေအားလုံးမဟုတ်ဘူး။. တခြားသကြားလုံးတွေလည်း ရှိတယ်။. ၎င်းတို့သည် သကြားလုံးချေမှုန်းသည့် ဆိုဒါအဆိပ်အဆင့်ကို ရှင်းလင်းရာတွင် ကူညီပေးသည်။.
အဆင့်တိုင်း၏အခက်အခဲ Candy Crush ဆိုဒါ Saga မတူပါဘူး။. သို့သျောလညျး, တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ အခက်အခဲတွေ တိုးလာနိုင်ပါတယ်။. ဘိုးတော်, အဆင့်တစ်ခုစီတွင် မတူညီသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။.